အရှင်ပညာသိရီ၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
အရှင်ပညာသိရီ သည်သူရ​အောင်​'s ၏ 'ဝိရိယ၏ အရည်​​သွေ​လေးမျိုး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
phyuthi သည်အရှင်ပညာသိရီကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
အရှင်ပညာသိရီ သည်A BuddhismworldAdmin's ၏ 'တရားအားထုတ်တဲ့အခါစကားပြောရမှာလား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
အရှင်ပညာသိရီ သည်A BuddhismworldAdmin's ၏ 'ဘုရားရှင်က ကျားမ တန်းတူထားပါသလား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
အရှင်ပညာသိရီ သည်ဉာဏ်လင်းမြို့'s ၏ '"အရိုးစွဲနေသောအမှား အသိများကို ဖော်ထုတ်တင်ပြခြင်း "★' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
အရှင်ပညာသိရီ liked အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s discussion ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း ဘယ်လိုဖွင့်ကြလဲ၊ ဘယ်လိုဖွင့်ကြမလဲ? (ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်များ)
အရှင်ပညာသိရီ သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ မိန့်ခွန်း (ရုရှားနိုင်ငံ အဆင့်မြင့် ဘာသာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပွဲ)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
အရှင်ပညာသိရီ သည်လမင်းကြယ်စင်'s ၏ 'မုံရွာမြို့နယ် ဗောဓိတစ်ထောင်ဘုရားသမိုင်းကြောင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
အရှင်ပညာသိရီ သည် မူကြိုဆရာ's၏ 'အစစ်ကို ဘာကွယ်နေသလဲ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဆရာတော်ဦးဇနကာဘိဝံသရဲ့စကားကမှတ်သားစရာပါပဲ ဒါပေမဲ့ ဆင်းတုတော်ဆိုတာကလည်းဥဒ္ဒိဿစေတီထဲပါတယ် ကိုရင်ပြောတာ မှားရင်လည်းပြင်ပေးပါ။"
အရှင်ပညာသိရီ replied to နီစံ (အနီ)'s discussion 'မေတ္တာ ကဏ္ဍ'
"တစ်ခါတလေ စာကျက်ရတာကတော်တော်ပျင်းစရာကောင်းတယ် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးအနန္တလို့ တွေးပြီးဖြေရတယ်။"
အရှင်ပညာသိရီ replied to yinmaingnaw's discussion 'ပိဋကတ်သုံးပုံကို စောင့်တာ ဟုတ်မဟုတ်......'
"ကိုရင်လည်းသေချာတော့မသိဘူး ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ် သေချာမသိတော့ပြောရခတ်တယ်။"
အရှင်ပညာသိရီ သည် thein wai's၏ 'မကောင်းလည်း ကံ၊ ကောင်းလည်း ကံဟု ယူဆကြသူများ။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"မကောင်းလည်းကံ ကောင်းလည်းကံဟု ကံကိုချည်းသာ မကိုးရာဘူး ပညာညာဏ်ဖြင့် သင့်မသင့်ကို အခွင့်ရှု၍ အပြုလုံးလ ရှိအပ်စွတည်း ဟုမည်လည်ဆရာတော်ရဲ့မဃဒေဝမှာဆိုထားတာက ကံကိုချည်းအားကိုးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့။"
အရှင်ပညာသိရီ သည် thein wai's၏ 'နှစ်ဖက်မြင်။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ကိုရင်တို့ ဆရာသခင်ဘုရားရှင်ရဲ့ ဆုံးမစကားတွေကမှတ်သားစရာတွေပါ။"
အရှင်ပညာသိရီ replied to အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s discussion 'ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း ဘယ်လိုဖွင့်ကြလဲ၊ ဘယ်လိုဖွင့်ကြမလဲ? (ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်များ)'
"မှန်ပါ့ဘုရား တပည့်တော်တို့ ကျိုးစားကြပါမယ်ဘုရား။"
8:51pm အချိန်ဇွန် 12, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:21pm အချိန်ဇွန် 17, 2014, တွင် ကိုရုပ်ဆိုးဥယျာဉ်စောင့် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဆင်မပြေပါဘူးဘုရား.....အလုပ်ကလဲပိတ်ရက်နဲ့လုပ်ရက်ကပိတ်ရက်ကများလာသထက်များလာတော့....ပိုဆိုးတာက ပါ့စပို့ရှိရဲ့နဲ့ ဆုတ်ဖြဲပြီးဖမ်းနေတာကဆိုးလာပါတယ်ဘုရားပြောရင်တောရှည်ကြီးပါပဲ....အရှင်ဘုရားလဲကျန်းမာလို့ကိုယ်စိတ်နှလုံးအေးငြိမ်းချမ်းသာပါစေဘုရား.............
6:56pm အချိန်ဇွန် 12, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:01pm အချိန်ှဧပြီ 13, 2014, တွင် ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။